निर्मला प्रकरणले सताइरहनेछः आइजिपी खनाल
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनालले यही माघ २९ गते अवकाश पाउँदै छन् । २०७४ चैत २९ देखि यो जिम्मेवारी सम्हालेका उनको कार्यकालमा केही उदाहरणीय काम भए पनि धेरै मुद्दा अधुरै छन् । सर्वाधिक जनचासोमा रहेका निर्मला पन्त र ३३ किलो सुन प्रकरणलाई आइजिपी खनालले टुंगोमा पु¥याउन सकेनन् । यही सेरोफेरोमा नागरीकर्मीले उनीसँग गरेको कुराकानीः
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने पनि प्रहरी नै हो । बाँकैका दीपक हेमकारको परिवार हत्यामा संलग्न पक्राउ, पूर्वराजदूत केशव झाको हत्या अनुसन्धान, जबर्जस्ती करणीका फरार प्रतिवादी १९ वर्षपछि अमेरिकाबाट पक्राउ, बैंक एटिएम ह्याकिङ घटना अनुसन्धानलगायत धेरै काम भएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा गुण्डागर्दी गर्नेलाई तह लगाइएको छ।
कहिलेकाहीं शान्त भनेर सुरु गरिएका कार्यक्रम अशान्त हुन्छन्। त्यहाँ उपस्थित नागरिक नै असुरक्षित हुन्छन्। त्यसकारण अलि बढी हुन थाल्यो, भिड कानुनरनियमभन्दा बाहिर जान थाल्यो भने नियन्त्रणमा लिनैपर्छ। अराजकता भइरहेको ठाउँमा प्रहरी मुकदर्शन हुन सक्दैन र मिल्दैन।
त्यसरी पनि नबुझौं। प्रहरीको उद्देश्य नै समाजलाई शान्त र सुरक्षित राख्नु हो। प्रहरीलाई नै गोली चलाएपछि आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले प्रतिकार गरेको हो। एकजना गुण्डा मर्दा कैयौं नागरिकले शान्तिसँग बाँच्न पाउँछन् भन्नेतिर पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ। हिजो छाती फुलाएर खुलेआम हिँड्ने गुण्डाहरू आज प्रहरीले मार्ला कि भन्ने डरले ‘साइज’मा आएका छन्। अराजकता फैलाउने, गुण्डागर्दी गर्ने्विरुद्ध प्रहरी जहिले जाइलाग्छ।
अझ कतिपय घटना त प्रहरीमा नआउँदै ढिसमिस डिसमिस पार्न खोजिन्छ। अलि अलि राजनीति पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न असहज भएको हो। निर्मला हत्यकाण्डमै पनि पर्याप्त अनुसन्धान आधार अर्थात् प्रमाण पुगेनन्। सकिने र छिटो हुने काम त प्रहरीले गरिरहेकै छ। जस्तैस् तेजाब छ्याप्नेलाई हेटौंडाबाट समात्यो। चिनियाँ गिरोह पक्राउ ग(यो।
निर्मला पन्त बलात्काररहत्या घटना तपाईंकै कार्यकालमा टुंगो लाग्छ भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए, तर यसमा तपाईं ‘फेल’ भएकै हो ?
प्रहरी चुकेको होइन। वास्तविकता बाहिर ल्याउन विभिन्न तरिका अपनाइएको थियो। खासमा प्रमाण नै नष्ट भएका कारण प्रहरीले कारबाही गर्न नसकेको हो। अझै पनि गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ। शवमा भएका चोटपटक, प्राप्त प्रमाण, घटनास्थलको मुचुल्का, डिएनए परीक्षणलगायत धेरै पक्षमा प्रहरीले अति ध्यान पु(याएको छ।
नेपाल प्रहरीका तल्लो दर्जामा कार्यरत कर्मचारीमा जागिर छाड्ने समस्या बढ्दो छ। तपाईंकै कार्यकालमा पनि ५ हजारभन्दा बढी प्रहरीले बीचमै जागिर छाडे, उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास किन भएन ?
यो कुरा भ्रम मात्रै हो। मैले त्यस्तो अन्याय गरेको छैन। नियम र प्रक्रियाबमोजिम नै सरुवारबढुवा भइरहेका छन्। मेरा विपक्षीले मलाई विवादमा पार्न यस्तो हल्ला फैलाएका हुन्। मैले त झन् समयमै सरुवारबढुवा गरेको छु। जसमा पहिलेजस्तो कुनै राजनीतिक गन्ध पनि छैन। आरोप लगाउनेलाई त के नै गर्न सकिन्छ र ?
त्यस्तो हुँदै होइन। अहिले सबैतिर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेका छन्। विवादमा आएको प्रहरीलाई चितवन पठाउने कुरै भएन। यो विषय एकरदुई दिनमै टुंगिन्छ। चितवनमा काम गर्न सक्ने सक्षम प्रहरी पठाउँछौं।